Yazi into ekuthiwa yeyokwabelana ngemithi ngesondo- imfashini yeendlela zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ihlaziywe 14/09/2020 23:09 | Ukunyamekela, fashion, Imizila
Ukuziphatha ngokwesini yenye yeendlela ezikhoyo kwifashoni kuluntu lwethu, Luhlobo lokubonakala kwendoda ngendlela enomtsalane nangendlela ekhethekileyo. Kweminye, imeko eyimfihlelo yendoda eyonga inkangeleko yayo kunye nokhathalelo lomzimba wayo ishiye ngasemva, ngoku Sele siqaphele amadoda anomtsalane abonakala edimazekile kwaye engonwabanga, yiyo loo nto benomtsalane omkhulu.
Eli nqaku livela kwiimagazini zabasetyhini apho babonisa ngokweenkcukacha uhlobo lwendoda ethi indlela yobume, yokunxiba kunye nokubonakala ibonakaliswa kwaye inemfashini. Indoda e-lumbersexual icacisiwe njengoluhlobo lwendoda, njengabantu abaneempahla ezingcolileyo, ngaphandle kwezixhobo kwaye ngubani abayikhathaleli kangako inkangeleko yabo.
1 Ungayibona njani into yokugawulwa kwabantu besini esinye?
2 Bobuphi ubuntu obubangelwa kukungumlingani wemithi?
3 Iimpawu eziphambili zomthi wesini
3.1 Unonophelo lomntu
3.2 Usuku lwakho namhlanje
Ungayibona njani into yokugawulwa kwabantu besini esinye?
Ingcaciso yayo iza isikhokela kolu hlobo lomntu, nangona ingelogama ngqo leli gama. Bahlala benxiba ijean, iihempe ezi-plaid, kunye neebhutsi zesikhumba ze-rustic., Zonke zinomoya omncinci welizwe, kunye nempahla ye-rustic kunye nengakhathalelwanga.
Inkangeleko yakhe ayisiba ntle, iindevu zakhe ziyasala, zinde kwaye zonakalise kwaye inkathalo yakhe iya kuba ngononophelo, kodwa ngendlela esisiseko. Ngamanye amagama, siyahlangana indoda enobume obusidlangalaleni kunye nomfanekiso wesintu kakhulu "wendoda yelizwe".
Igama lalo linokuvela kwigama "amaplanga", ngesiNgesi elithetha "iinkuni zokubasa" okanye "umgawuli wemithi" elithetha "umgawuli wemithi". Kungoko ukwakheka kwamagama akhe ngeSpanish Kuya kuguqulelwa njenge-rogejack yesondo okanye indlela esiyibize ngayo ngokuchanekileyo ngokuba ngumlingani wesini.
Kufana naye, nendoda enesidima ngokubonakala komthi womthi, ngeebhutsi ezingekho ezindleleni, ihempe evaliweyo, ijini kunye nentshebe engakhange ilumke kakhulu.
Bobuphi ubuntu obubangelwa kukungumlingani wemithi?
Umntu ohamba ngomthi iza kwinqanaba lombono weklasikhi wendoda eyindoda, ephawula ubuqili bayo kwaye inike amandla kwisini sayo, ngenkangeleko yendalo, echaphazelekayo ngokuhamba kakuhle, kodwa ngaphandle kwefashoni. Banika ukubonakala kokucacileyo, ukungathathi hlangothi, ukuvuka, amadoda aluncedo avusa uvuyo.
Ubuntu bakhe buyihippie, bendalo, uyazi ukuba uyabuthanda, kodwa akazikhathazi ngokuzilungisa. Inkangeleko yakhe imenza abe nokubonakala kwamehlo, ukuba ndlongondlongo eyomeleza imeko yakhe yobudoda.
Ngaphezulu ngaphaya kokubonakala ngathi, Ungabonisa ukuba ngumntu olula ngakumbi kwaye ungumntu, ngaphezu kwayo yonke into efikelela kuyo hlala kude kwimidla yemali kunye nokunethezeka okugqithileyo. Unokuba yindoda elula ngaphandle kokuya kwindawo yokutyela eneenkwenkwezi zeMicrosoft kwaye ukhetha i-barbecue yokwenene ekwabelwana ngayo nabahlobo. Kodwa inye into eqinisekileyo phantse wonke umntu uphila ngemisebenzi enxulumene nobuchule kunye nobugcisa.
Iimpawu eziphambili zomthi wesini
Ukuthetha kwakhe kuyichaza, kanye njengokuba umntu ongatshatanga naye ezama ukunika umntu ozilungisa, ohendayo kunye nokuzithemba I-lumbersexual ayikhathali. Ungabona ukuba ujongo lwethenda, Ngobukeka be-bohemian kodwa kwangaxeshanye kukwenza uzive ngathi ungoyena mntu ulukhuni awenzela ukuba onke amabhinqa anyibilike.
Imbonakalo yayo ayikhathalelwa nangona isempilweni. Ngokwesiqhelo bangamadoda abaphumayo kwaye bayazi ukuba banxibe into yokuqala abayibambe egumbini. Ngokuqinisekileyo bayenza ngenjongo kwaye oko kubanika ithuba lokuzenza ngathi bayile ndlela bayiyo, yendalo.
Iimpawu ezifanekisela ubukhulu becala ngokwesini sokunxiba zinxibe iihempe, phantse zonke iimilo kunye nemibala, kodwa ezona zigqame kakhulu ngumbala obomvu nomnyama. Iibhulukhwe zijini, kunokuba zinxitywe kunye neebhutsi zelizwe okanye isitayile sokuhamba. Abanye baya kubheja ngokunxiba isitayile seeteki ezilula kunye neminqwazi yoboya ayizukulahleka, into ephawuleka njenge-icon yendoda yokugawula imithi.
Iindevu zakhe azicacanga, zishiywe kanjalo ngaphandle kokuqhubeka, ngaphandle konyango okanye ukulungiswa, kakhulu kwaye kuyenza iphawule umqondiso wayo wesazisi. Iinwele nazo azicocekanga, zinde okanye zigqithile.
Ukusetyenziswa kweekhrim ebusweni abukho phakathi kononophelo lwabo, njengokulungiswa kwe-waxing okanye eyebrow, Oko kukuthi, siyakwazi ukubona ukuba indalo yayo iguquka ngoluhlobo. Baninzi nokubheja nxiba iitattoos emzimbeni, ingakumbi ezingalweni.
Usuku lwakho namhlanje
Bangamadoda ahloniphekileyo, abanye banesiphiwo sokuba zizandla kwaye bakhetha ngandlela zonke ngokwesiko. Ukuthanda kwabo ukutya kusisiseko, kodwa ngokungcamla, ngokuqinisekileyo baya kubheja ngokutya isteki esilungileyo kunye nebhotile yewayini elungileyo.
Bayayithanda indaloBathanda ukunxiba iimpahla ezintle kwaye bonwabele iindawo ezinjengehlathi, imilambo okanye iintaba. Kodwa nangona kubonakala ngathi banenkangeleko epholileyo kunye nokuzola, kufuneka kuthiwe babonakala ngathi bazimisele. Bayabuthanda ubugcisa basezidolophini, bathanda itekhnoloji kwaye uze nezinto zakho ezilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Yazi into ekuthiwa yeyokwabelana ngemithi ngesondo